MegaTV Player wuxuu ka daawan karaa wadiiqooyinka lacag la'aanta ah ee ka socda adduunka | Androidsis
Waxaad rabtaa daawo kanaalka lacag la’aan? Cilad darrada haysata Wiseplayer ee la xiriirta baahinta cayaaraha kubbadda cagta, maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo oo aan kugula taliyo dalab beddel ah, oo aan kula socon doonno awood u leedahay inaad si lacag la’aan ah u daawato TV-ga lacag-bixinta ah, oo ay ku jiraan kanaalada kubbadda cagta ama bixisay kanaalada isboortiga ama rukumo.
Codsiga su'aashu waa wax aan ka badnayn ciyaariyahan warbaahineed oo fudud oo aan bilaash uga heli karno Google Play Store, oo ah dukaanka rasmiga ah ee loogu talagalay Android, magaca Ciyaaryahan MegaTV. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa, sida aan kuugu tusno fiidiyowga ku lifaaqan cinwaanka qoraalkan, hawlgalka fudud ee arjiga iyo sidoo kale xitaa ka fudud habka qaabeynta si aad u daawan karto dhammaan TV-yada lacag-bixinta bilaashka ah si toos ah mobilkaaga ama kiniiniga leh nidaamka hawlgalka Android.
Sida aan kuugu sheego fiidiyowga ku lifaaqan cinwaanka qoraalkan, sidoo kale waxaan ku tusayaa sida ugu wanaagsan ee codsigu u shaqeeyo MegaTV Player si aad u daawato lacag bixinta TV-ga bilaash moobiilkeena gacanta ee 'Android mobile', dalabku waa u fududahay in la isticmaalo sida ku darista hal ciyaar.tv qaybta in URL ee Liiska Ciyaarta si ay u tarmaan.
Tallaabadan fudud ee gelinta hal ciyaar.tv waa nalagu soo oogi doonaa Liisyo badan oo ka mid ah wadiiqooyinka lacag-bixinta ee sida habboon loogu abaabulo qaybaha sida Isboortiga, Taxanaha TV-yada, Filimada iyo silsiladaha, Muusikada, Carruurta, sayniska iyo dhaqanka ama ay u kala saaraan waddammada Latin Amerika ugu waaweyn sida Mexico, Argentina, Chile ama Colombia iyo kuwo kale iyo, sidee bay u noqon kartaa haddii kale, kanaallada guud iyo Wuxuu ka furan yahay Spain.
Liiska kanaallada lacag bixinta lagu rakibo Ciyaaryahan MegaTVMarka lagu daro inaad na siiso dhammaan fursadahaas aan kor kuugu sheegay, waxaa sidoo kale naloo fidiyay fursado kale oo xiiso leh sida helitaanka taxane ah Kanaalka Premium, taas oo si siman oo bilaash ah oo aan u baahnayn rukhsad, waxaan heli doonaa marin waxyaabaha gaarka u ah dadka waaweyn.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah liiska kanaallada lagu muujiyey qaybaha tabta, midig dhamaadka dhamaadka magaca Kanaalka BETA. Liiskan kanaallada 'BETA' waxaan ka heli doonnaa inaan ku bixinno kanaallo lagu bixiyo subtitles Isbaanish ah, kanaallo bixinno qaybta Boomerang, Sahaminta, Shabakada Gaadhiga ah, Comedy Central o Nickelodeon iyo xulashooyin kale oo badan oo laga fiirsado.
Waxaas oo dhan iyo in ka badanba, waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso MegaTV Player oo ku yaal bartaada 'Android terminal', iyo weliba intaas awood u yeelan kartaa inaad u daawato kubada cagta bilaash iyo kanaalada ugu lacag bixinta lacag la’aanWaxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ku raaxeysato wadiiqooyin badan oo maqan ama aan ku jirin heerar ahaan codsiyada kale ee nooca ah.
1 Ka soo degso MegaTV Player bilaash Google Play Store
2 Barnaamijyo badan si aad u daawato kanaallada lacag la'aanta ah
2.1 Adiga Ciyaartoyga TV-ga
2.2 Kala Bixi Ciyaaryaha TV-ga
2.5 TV-ga Punga ee Bilaashka ah
Ka soo degso MegaTV Player bilaash Google Play Store
Cusboonaysii: haddii MegaTV Player aan la heli karin, iskuday inaad soo dejiso midkan kale app si aad u daawato lacag bixinta TV-ga oo bilaash ah.
Barnaamijyo badan si aad u daawato kanaallada lacag la'aanta ah
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad kala soo baxdo codsiyo badan si aad u daawato kanaallada lacag la’aan lagu bixiyo, hoosta waxaan kuugu soo bandhigi karnaa waxyaabo kale oo aad ku beddeli karto MegaTV Player. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iyaga:
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu daawan karo kanaallada lacag la’aanta ah ee laga helo taleefankaaga casriga ah ee casriga ah ama kiniiniga ah ayaa ah Adiga Ciyaartoyga TV-ga, codsi weyn oo APKkiisa (41,67 MB) lagala soo bixi karo Halkan. Thanks to barnaamijkan waxaad ku ciyaari kartaa fiidiyow ama filim kasta oo aad ku keydisay qalabkaaga, laakiin sidoo kale waxaad marin uheli doontaa kanaallo badan oo TV ah gudaha Spain, oo ay ku jiraan tiro wanaagsan oo kanaal ah oo laga heli karo Movistar +.
Kala Bixi Ciyaaryaha TV-ga
Haddii usbuucaan walba aad kahelayso ciyaarta quruxda badan cidna oo kale oo aad dareento midabada kooxdaada inay dhex socdaan xididdadaada, markaa Kala Bixi Ciyaaryaha TV-ga waa arjiga aad ubaahantahay waayo waa barnaamijka loogu isticmaalka badanyahay kubada cagta si bilaash ah ugu daawo HD, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad sii deyso wadiiqooyin badan oo heer qaran iyo heer gobol ah oo aad lacag la'aan ku bixiso TV-ga. Waxay ku shaqeysaa liistada w3u mahadsanid taas oo aad ka daawan karto dhammaan kanaallada aad ka rabto waddanka adduunka aad rabto. Waad soo dejisan kartaa APK-ka barnaamijka 'SpLive TV Player' Halkan.
Codsi kale oo kaa caawin doona inaad ka daawato kanaallada lacag-bixinta bilaashka ah taleefankaaga casriga ah ee 'Android' waa Mobdro, mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan uguna adeegsiga badan. Mahadsanid barnaamijkan waa inaad ka heshaa foojar loogu talagalay dhibcaha isha ee farmasiga kuugu dhow maxaa yeelay ma awoodi doontid inaad joojiso raaxeysigaaga nuxurka socodka aan joogsiga lahayn: kanaalada mawduucyada leh, munaasabadaha waaweyn ee isboortiga, kanaallada telefishanka dhaqameed iyo waxyaabo kale oo badan, labadaba Isbaanish iyo shisheeye, sidaa darteed xitaa waad ku tababaran kartaa luqadaha. Mobdro waa barnaamij boqolkiiba boqol ah kanaallada TV-ga, taas oo ah, halkan waxaad ku dooraneysaa kanaalka aad rabto inaad daawato, sida TV-ga, inta barnaamijku socdo. Waad soo dejisan kartaa Mobdro APK Halkan.
Haddii aad tahay taageere run ah kanaallada shineemooyinka mawduucyada ka socda, laakiin nidaamka soo-jireenka ah ee raacitaanka barnaamijku wuu kugu caajinayaa, adiga RepelisPlus waad awoodaa si bilaash ah uga daawo dhamaan taxanaha, filimada iyo dokumenteriyada aad rabto, adigoon sugin waqti cayiman oo imaado. Intaa waxaa dheer, waad ku daawan kartaa iyaga oo qulqulaya ama kala soo bixi kara waxyaabaha ku jira taleefankaaga casriga ah si aad ugu daawato meel kasta oo aan lahayn isku xirnaan. RepelisPlus Maaha barnaamij lagu daawado kanaalada TV-ga ee lacag bixinta bilaashka ah, laakiin waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo uguna wanaagsan ee ku jira qaybtiisa. Ha moogaan Waxaad ku soo dejisan kartaa APK bilaash halkan.
TV-ga Punga ee Bilaashka ah
Haddii aad weli tixgeliso inaadan haysan beddello kugu filan oo aad ku daawan karto kanaallada lacag-la'aanta ah ee TV-yada, taxanaha, filimada iyo waxyaabo kaloo badan oo ku saabsan barnaamijkaaga 'Android', waxaan ku raacaynaa dhawr beddeleyaal dheeri ah TV-ga internetka Punga Bilaash ah waa codsi aad ku awoodid daawan kanaallada Isbaanishka iyo Latin Amerika si bilaash ah, oo tanna waxaa ku jira dhammaan kubadda cagta, kanaalada ugu badan Movistar Plus iyo inbadan. Dabcan, xusuusnow inaad isticmaasho barnaamijkan waxaad u baahan doontaa inaad haysato nooca VLC-ga oo fiidiyoow ah oo lagu rakibay bartaada ama, haddii kale, ma shaqeyn doonto. Waad soo dejisan kartaa TV-ga internetka Punga Bilaash ah halkan bilaash ah.
La jaanqaadi kara labada taleefannada gacanta ee Android iyo kiniiniyada, MXL IPTV ayaa suurtogal ah inay tahay codsiga ugu fiican ee lagu daawado kanaallada TV-ga ee bilaashka ah, ama ugu yaraan taasi waa waxa ay qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaasheedu u maleynayaan. Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa in la helo waxaa laga heli karaa Play Store, sidaa darteed uma baahnid inaad adeegsato codsiyo dibadeed ama aad qatar u gasho.
MXL IPTV waa iyada oo ku saleysan liisaska M3U iyo kanaalada m3u8 in aad gudaha iyo meel fogba ku shuban karto, adiga oo la jaan qaadaya qaababka fiidiyowga ee hadda socda.
Intaa waxaa dheer, waa wax fududahay in la isticmaalo Waxaad ka raadin kartaa liistada M3U taleefankaaga casriga ah oo aad si dhakhso leh oo fudud ugu dhejin kartaa MXL IPTV, oo sidoo kale bixisa faa'iidooyin badan oo dheeri ah. Gabi ahaanba waa bilaash, markaa maxaad sugeysaa inaad kiciso oo ay socoto?
Ma ogtahay codsiyo dheeri ah oo loogu talagalay daawo kanaalka lacag la’aan? Waxaan rajeynayaa in jaantusyada jimicsiga ee wiseplay sii wad orodka mudo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » U fiirso kanaallada lacag la’aanta ah
Isaaq sainz dijo
Tanina dhowaan waxay la mid noqon doontaa Wiseplay
Jawaab Isaac Sainz
Megatv adiguna waxaad ciyaartaa ciyaar yahan waa kuwa kaliya ee aan ogahay, ma jiraa qof intaas in ka badan kugula talinaya?
Jawaab ku sii Abisai Castillo
Waa wax xun, ha lumin waqtigaaga inaad soo dejiso, waxaan u maleynayaa in nimankani ay xoogaa lacag ah ku siiyaan si aad ugu dhiirrigeliso qashinkan
Jawaab Eduardo Rojas
Isbarbardhig, waa uun talo bixin. Ma siineyso in qof la caayo. Haddii aad rabto barnaamij la mid ah oo aan dhibaato kuu keenin, iska bixi. Waxaad dooneysaa inaad ku daawato TV-ga dabool, barnaamij bilaash ah walina waad waalaysaa ... hahaha. Salaan!
Ku jawaab malito
Aad baad u mahadsantahay Salaan !!
Jawaab José Maldonado
Codsiga ma xuma, halkii Wiseplay uu maalin kasta ka sii xun yahay, tan ugu fiican shaki la'aan waa Free Direct S
Jawaab Terry Bogard Uchiha
Waxay u adeegsan karaan kram chrome si ay ugu isticmaali karaan TV-ga oo waxay leeyihiin hab faa'iido leh oo ay ku arkaan, barnaamijku aad buu ugu fiican yahay taleefanka gacanta.
Waxaa macquul ah inay ii sheegaan inaanan fahmin, laakiin waxaan ahay qof 68 jir ah; taasi waa in la yiraahdo, da'da saddexaad. Ma fahmin inta badan tan, laakiin waxa aan rabo inaan weydiiyo ayaa ah in codsigan lagu dhejin karo PC haa ama maya. Waxaan horeyba ugu haystay Android-kayga waana codsi ugufiican, gaar ahaan inaad aragto Beins Sport oo siisa dhamaan kulamada Spain si cad oo aan kala go 'lahayn.
Haddana qaar badan oo ka xumahay la-tashiga. Waan ku celinayaa, waxaan ku dhejin karaa kombuyutarkayga. Mahadsanid. Waxaan rajeynayaa inay ii jawaabaan.
Jawaab José Alberto Moya Picado
Jose Alberto Moya, jawaabtu waa haa, laakiin marka hore waa inaad ku rakibtaa nooc ka mid ah emulatorka android daaqadaha, waxaa jira dhowr sida Nox, iwm, waxaan u isticmaalay Bluestack dhibaato la'aan, nasiib wanaag.
Salaan baa jira! Su'aal ma suurogalbaa in sawirka laga soo wareejiyo taleefanka loona wareejiyo TV-ga iyada oo loo marayo Chromecast? Waxaan rajeynayaa in qof ii jawaabi doono ... waan isku dayay laakiin waxaan hayaa muuqaal qaboojiye shaashadda guriga ee Mega TV ... aad baad u mahadsantahay!
Ku jawaab Ferchu
Waad salaaman tahay, heer sare, arjiga waxaa loo arki karaa sifiican oo hufan, waxaa jira ku dhowaad dhammaan wadiiqooyinka laga bilaabo hbo illaa inta ugu fiican ee la yaqaan iyo waxa muhiimka ah waa bilaash. iyada oo aan la siinin nasiibka shirkadda cbles directv iwm. Iyagu waa inay isla sidii oo kale sameeyaan oo ay dib-u-qaabeeyaan calaamadda ka dibna ku soo dallacaan hehe
Had iyo jeer waan u isticmaali jiray dhibaato la'aan, mahadnaqa kuwa wax soo saaray.
Waxaan rabaa inaan ogaado haddii uu jiro codsi Mega Tv ah oo loogu talagalay iPhone 6
Waxaa laga tirtiray playstore
Iima ogola in aan hoos u dhigo. Shayga lama helin. Maxaad qaban kartaa?
Ku soo jawaab Nora
Maxaa ku dhacay barnaamijka telefishanka 'mega tv player' ee aan ku jirin gogle play storet
Ku jawaab Manuel marquez perera
Kuma shuban kanaallada la tilmaamayo url oneplay.tv ee khaldan ciladku xiriirku si sax ah looma bilaabin, xir oo furo arjiga haddii aad dhibaatooyin sii wadatana waxaad aadaa kooxda facebook ama xaqiiji xiriirkaaga
Jawaab Jorge Bernal
Mar dambe ma lihid laba jibbaaran si aad ugu aragto cromecash
Halkan waa xalka in la helo tv-ga bilaashka ah, filimada iyo kuwa kale. raacaya iskuxirka
Jawaab Alejandro Romero
Salaan kadib, waxaan ka imid Ecuador, qofna ma i caawin karaa ama ii sheegi karaa sida loo galo kanaalka Ecuador maaddaama aan helayo mahadsanid madhan
Ku jawaab Luis m
Kanaal xiiso leh hadaanay ahayn qadarka barnaamijyada nuqullada ah ee ay dhigayaan, mararka qaarkood way sii labanlaabayaan, iyo inay kor u qaadaan dhammaantood (Waan ogahay inay taageerayaan xayaysiinta) laakiin gelinta labaatan daqiiqo ee xayeysiinta waxay umuuqataa wax yar oo xad dhaaf ah. Dabcan, adoo badalaya kanaalka, dhibaatadii waa la xaliyay.
Ma haysatid sanduuqa si aad ugu aragto cromecash.
Ku jawaab Pitoc